९ महिनाको छोरिलाई छो’डेर आमा हिडीन, छोरीलाई फ’काउन नसकेर आफै…. – Namaste Host
March 26, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ९ महिनाको छोरिलाई छो’डेर आमा हिडीन, छोरीलाई फ’काउन नसकेर आफै….
यो पनि पढ्नु होस:-एजेन्सी । नेपालीमा एक उखान छ । हुने कुरालाई कसैले रोकेर रोकिदैन । यो भनाई भारतको गुरुग्रामको सेक्डर ८२ मा भएको घटनाले पुष्टि गरेको छ । गएको शुक्रवार करिब ३ र ४ वजे दिउसो रमझम पानी परेको थियो । भटिकाको सिग्नेचर भिलामा काम गर्ने मजदुर त्यहाँको एक रुपमा ओत लागेर बसेका थिए ।
तिनीहरू हल्का वर्षाका कारण रूखमुनि उभिरहेका थिए। जानकारीका अनुसार, बिजुलीको गर्जनका कारण सबै जना ओत लागेर बसेका थिए। अरु घरमा थिए भने चार जना रुखमुनी पुगेका थिए ।चार मालीहरू यो बर्षा र आकाशको गर्जनवाट बच्न रूखमुनि उभिरहेका थिए। एकाएक, बिजुलीको चमक बिजुलीको ज्वाला जस्तै आकाशबाट यी मालिहरु तिर गएको देखिन्छ ।उनको परिचय शिवदत्त पुत्र देवदत्त निवासी अलिगंज, लाली पुत्र कल्लू, रामप्रसाद पुत्र सुन्दर र सुपरवाइजर लोहागडका अनिल हुन् ।
भोलि देखि निषेधाज्ञा जारी , केके बन्द भए ?